तपाईं छुट्टिमा हुँदा, तपाईंले जापानी सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। | ページ2| COVID-19 多言語情報ポータル
1. लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम（支給申請書; सिक्यु सिनसेइ-शो）
लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम मा तीन खण्डहरू पर्दछन्, जसमा पूरा गर्नुपर्ने तेह्र वस्तुहरू समावेश हुन्छन् (प्रत्येक वस्तुको नम्बर हुन्छ)। कृपया तपाईंलाई यो फारामको पृष्ठ2पेश गर्न आवश्यक पर्दैन भनी ध्यान दिनुहोस्।
माथिको लिङ्कबाट यो कागजातको PDF ढाँचा डाउनलोड गरेर Acrobat Reader को प्रयोग गरी यसलाई खोल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा फाराम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम सजिलैसँग प्रविष्ट गर्नका लागियो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो आवेदक स्वयंले विस्तृत जानकारी भर्ने खण्ड हो।
1. तपाईंको नाम : कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र छुट्टि थप्न सुनिश्चित गर्नुहोस् (पठन सहायतालाई यसको उच्चारण संकेत गर्न शब्दभन्दा माथि राख्नुपर्छ। यो सामान्यतया शब्द वा नामभन्दा माथि लेखिन्छ जुन कसरी पढ्ने भन्नेबारे बुझ्न कठीन हुन्छ)।
2. लिङ्ग：तपाईंमा लागू हुनेमा（✔）चिन्ह लगाउनुहोस् ।
3. जन्ममिति : जन्म वर्ष अनुसार, तपाईंले आफ्नो जापानी जन्म वर्ष भर्नुपर्छ, जसको अर्थ ग्रेगरीयन पात्रो वर्ष अमान्य छ। तपाईंको जापानी जन्म वर्ष थाहा पाउनको लागि, कृपया यो उमेर तालिमामा सन्दर्भ लिनुहोस् र आफ्नो खोज्नुहोस्।
4. सम्पर्क ：कृपया हुलाक कोड र ठेगाना भर्नुहोस्। फोन नम्बर प्रमाणित गरेर छोड्नुपर्छ।
5. बैङ्क खाता：बैङ्क खाता सम्बन्धी जानकारी भर्नुहोस् जुन लाभ जोडिएको छ। बैङ्क खाता तपाईंको नाम अन्तर्गतको हुनुपर्छ। तपाईंको नाम र यसको फुरिगाना पनि आवश्यक पर्छ।
5. अवस्था 1
तपाईंको बैङ्क खाता जापान पोस्ट बैङ्क（ゆうちょ銀行;युको गिन्को）बाहेक अन्य बैङ्कको हुनुपर्छ: कृपया माथिल्लो भागमा निम्न जानकारीको बारेमा लेख्नुहोस्:
शाखाको नाम र शाखा नम्बर（支店コード）
तपाईंलाई ”शाखा नम्बर (3-अङ्कको नम्बर)” भर्न आवश्यक हुँदा, ”बैङ्क खाता（金融機関コード; प्रत्येक बैङ्कमा निर्दिष्ट गरिएको 4-अङ्कको नम्बर)” संलग्न गर्न आवश्यक हुँदैन।
5. अवस्था 2
तपाईंको बैङ्क खाताजापानी पोस्ट बैङ्क को हुनुपर्छ:कृपया तल्लो भागमा निम्न जानकारीको बारेमा लेख्नुहोस्:
किगो (記号) :5वा 6-अङ्कको नम्बर
बाङ्गो (番号) : 8-अङ्कको नम्बर
※नोट: यो लाभ धेरैजसो अनलाइन बैङ्कहरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन।
②आवेदकको कार्यस्थलबारे जानकारी
6. तपाईंको कार्यस्थलको नाम : तपाईंले कसको लागि काम गर्नुहुन्छ उहाँको नाम लेख्नुहोस्।
7. तपाईंको कार्यस्थल कहाँ छ : कृपया तपाईंको कार्यस्थलको हुलाक कोड र ठेगाना लेख्नुहोस्।
8. लाभको अवधि：कृपया काममा अनुपस्थित हुने अवधिउल्लेख गर्नुहोस्। यो अवधि अप्रिल 1, 2020 र सेप्टेम्बर 30, 2020 को बीचमा हुनुपर्छ।
9. प्रश्न 8 मा निर्दिष्ट गरिएको अवधिभित्र4घण्टा वा सोभन्दा बढी समयसम्म तपाईंले आफ्नो कार्यस्थलमा काम गरेको दिनको रकम।
10. प्रश्न 8 मा निर्दिष्ट गरिएको अवधिभित्र4घण्टाभन्दा कम समयसम्म तपाईंले आफ्नो कार्यस्थलमा काम गरेको दिनको रकम।
11. प्रश्न 10 मा निर्दिष्ट गरिएको समय सीमाभित्र, तपाईंलाई कामबाट बिदा लिन जोर दिइएको दिनको रकम।
यो खण्ड (9-11) को आधा भागको पत्र भर्दा, कृपया लाभ भुक्तानीका लागि आवश्यकताहरूको पुष्टिकरणकोप्रश्न 7-❷(जुन तपाईंको रोजगारदाताद्वारा भरिएको हुनुपर्छ) मा सन्दर्भ लिनुहोस्”
* लाभले निम्न अवधि/काम गर्ने समयलाई समेट्दैन:
तपाईंले व्यक्तिगत कारणहरूका लागि कामबाट बिदा लिएको दिनको अवधि (उदाहरण: वार्षिक भुक्तानी बिदाहरू, व्यक्तिगत बिदा र त्यस्तै अन्य)।
तपाईं काममा भएको वा निर्धारित गरिए अनुसार काम गरेको दिन
तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको समय घटाएको हुनाले तपाईंले कम समयसम्म काम गरेको दिन
प्रश्न 8 मा निर्दिष्ट गरिएको समयावधिमा माथि उल्लिखित अवधि छ भने, आवश्यक अनुसार स्तम्भ 9-11 भर्नुहोस्। विवरणहरू निम्नानुसार छन्:
1）यदि तपाईंले प्रश्न 8 मा निर्दिष्ट गरिएको अवधिमा काम गर्नुहुन्न भने, कृपया स्तम्भ 9-11 खाली छोड्नुहोस्।
2）तपाईंले प्रश्न 8 मा निर्दिष्ट गरिएको अवधिभित्र कुनै पनि दिन4घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ भने/ व्यक्तिगत कारणहरू(उदाहरण: भुक्तानी वार्षिक बिदा लिने) ले गर्दा कामबाट बिदा लिनुभएको छ भने, तपाईंले स्तम्भ9मा प्रत्येक महिना उक्त दिनको रकम उल्लेख गर्नुहोस्।
3）तपाईंले प्रश्न 8 मा निर्दिष्ट गरिएको अवधिभित्र कुनै पनि दिन4घण्टाभन्दा कम काम गर्नुभएको छ भने, कृपया स्तम्भ 10 मा प्रत्येक महिना उक्त दिनको रकम उल्लेख गर्नुहोस्।
4）स्तम्भ9र 10 मा निर्दिष्ट गरिएको अवधिभित्र कुनै पनि दिनमा, तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको समय घटाएको हुनाले काम गर्ने समय निश्चित काम गर्ने समयभन्दा कम हुन्छ भने, कृपया स्तम्भ 11 मा प्रत्येक महिना उक्त दिनको रकम उल्लेख गर्नुहोस्।
तपाईंले अप्रिलमा4दिनको विर्षिक तलबी बिदा लिनुभएको छ भनी उल्लेख गर्न उदाहरणको प्रवेश।
मे मा, तपाईंले 8 घण्टाको निश्चित काम गर्ने समयमा काम गर्नुभयो, दिनको2(6 घण्टा छुट्टि) घण्टा मात्र काम गरेको5दिन भयो र तपाईंले दिनको 8 घण्टा काम गरेको3दिन भयो भनी उल्लेख गर्न उदाहरणको प्रवेश। यो अवस्थामा, तपाईंले मे मा4घण्टा वा सोभन्दा बढी समयसम्म काम गरेको3दिन भएकाले, स्तम्भ9को दोस्रो पङ्तिमा ”3” राख्नुहोस्। तपाईंले4घण्टाभन्दा कम काम गरेको र तपाईंलाई त्यसो गर्नका लागि तपाईंको रोजगारदाताले बाध्य बनाएको5दिन भएकाले, तपाईंले स्तम्भ 10 र 11 को दोस्रो पङ्तिमा ”5” पनि राख्नुपर्छ।
तपाईंले3घण्टा/दिनको निश्चित काम गर्ने समयका साथै आंशिक-समय काम गर्ने, अप्रिलमा दिनको3घण्टा काम गरेको4दिन भएको थियो भनी उल्लेख गर्न उदाहरणको प्रवेश। तपाईंले4घण्टाभन्दा कम काम गरेको4दिन भए तापनि, तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई त्यसो गर्नका लागि बाध्य पार्नुहुन्न। त्यसैले, तपाईंले स्तम्भ 10 को पहिलो पङ्तिमा ”4” राख्ने मानिन्छ। कृपया स्तम्भ 11 खाली छोड्नुहोस्।
12. छुट्टि हुनु अघि तपाईंको ज्यालाको कूल रकम : तपाईंलाई अस्थायी रूपमा व्यापार बन्द हुनु अघि गत6महिनामध्ये कुनै3महिनाको तपाईंको ज्यालाको कुल रकम उल्लेख गर्न आवश्यक पर्नेछ। यद्यपि, बोनस भुक्तानीको रकमलाई वर्जित गर्नुपर्छ। तपाईंले रकम प्राप्त गरेको वर्ष(हरू) र महिना उल्लेख गर्नुपर्छ।
13. नोटहरू : तपाईंसँग कुनै पनि नभएमा यसमा केही लेख्नु आवश्यक पर्दैन।
कृपया यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तपाईंले हस्ताक्षरभन्दा माथि हस्ताक्षर मिति संलग्न गर्न पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
COVID-19 को आर्थिक प्रतिक्रियाको भागको रूपमा, जापानी सरकारले जापानका प्रत्येक निवासीलाई 100,000 येन ह्याण्डआउट गर्ने नि...
तपाईंले आफू विदेशी भएको कारणले कार्यमा अनुचित व्यवहार पाउनु भएको थियो? यो गैरकानूनी हो!
नोभल कोरोनाभाइरसले तपाईंको कम्पनीलाई असफल बनाएको थियो? तपाईं विदेशी नागरिक भएका कारणले मात्र, आफ्नो जापानी सहकर्मीहरूले...